Vibrant Salon Bvudzi - Dhizaini magazini
Salon Bvudzi Kutora iyo yakakosha ye botanical mufananidzo, wedenga gadheni rakagadzirwa munzira yese, pakarepo rinogamuchira vaenzi kuti vadzike pasi, vachifamba parutivi rwechaunga, vachivagamuchira kubva panzira yekupinda. Kutarisisa muchikamu, iyo yakatetepa inotambanudzira kumusoro kune yakadzama goridhe kumusoro. Mifananidzo yeBotanic ichiri kuratidza kutenderera mukati mekamuri rose, ichitsiva ruzha runouya kubva mumigwagwa, uye pano pazova nebindu rakavanzika.
Zita rechirongwa : Vibrant, Vagadziri zita : Jacksam Yang, Izita remutengi : YHS DESIGN.
Salon Bvudzi Jacksam Yang Vibrant